Inona no atao hoe USSD? | Martech Zone fanafohezan-teny
Martech Zone » fanafohezan-teny » Fanafohezana manomboka amin'ny U	» USSD
USSD no fanafohezana ny Data momba ny serivisy fanampiny tsy voarindra.
Fitsipika momba ny fifandraisana izay ampiasain'ny finday mba hifandraisana amin'ny solosain'ny mpikirakira tambajotra finday. Miaraka amin'ny USSD, ny mpampiasa finday dia mifandray mivantana amin'ny fanaovana safidy avy amin'ny menus. Tsy sahala amin'ny hafatra SMS, ny hafatra USSD dia mamorona fifandraisana amin'ny fotoana tena izy isaky ny fotoam-pivoriana, ahafahana mifandray amin'ny roa tonta.